Keria Ibrahim: Hoggaamiye Sare oo ka tirsanayd TPLF oo la sii daayey - Awdinle Online
Keria Ibrahim: Hoggaamiye Sare oo ka tirsanayd TPLF oo la sii daayey
Boliska Federalka Ethiopia waxay u sheegeen Maxkamad Federal in mar hore la sii daayey Keria Ibraahim oo xubin ka ahayd Guddiga Fulinta ee Jabhadda TPLF ee Qowmiyadda Tigrayga ku nool Waqooyiga dalkaasi.
Keria Ibraahim waxay gacanta Boliska ku jirtay tan iyo bilowgii bishii December 1-dii ee sanadkii hore, kadib, markii ay Ciiddanka Federalka guluf colaadeed ku qaadeen Kooxda TPLF ee maamuli jirtey Gobalka Tigrayga ee Waqooyiga dalkaasi.
Hadalka Boliska Federalka ka soo baxay waxaa lagu sheegay in Haweeenaydaasi lala sii daayey 2 Hoggaamiye kale oo aan ka tirsanayn Xisbiga TPLF, balse, taageero u hayey Dagaalamayaasha Tigrayga.
Keria Ibrahim waxay horey u ahaan jirtay Afhayeenka Aqalka Sare ee Barlamaanka Ethiopia ee loo yaqaano Aqalka Federeshinka (The House of Federation) muddadii u dhexeysay 6-dii May ee sanadkii 2018-kii ilaa 9-kii June ee sanadkii 2020-kii oo ay is-casishay, kuna biirtay TPLF.
Sababihii ay Xilkaasi isaga casishay ayaana lagu tilmaamay, kadib, markii ay ka hortimid qorshihii ay Dowladda RW Abiy Ahmed dib ugu dhigeen Doorashadii Guud ee dalkaasi ka dhici lahayd bishii August ee sanadkii hore, sababo la xiriirta COVID 19.
Dib-u-dhigistaasi ayaana sababtay Xiisad Siyaasadeed iyo Duullaankii ay Ciiddanka Federalka ku qaadeen Hoggaamiyayaasha iyo Taageerayaasha Xisbiga TPLF bishii November ee sanadkii hore, kaasi oo aan ilaa iyo haatan lagu kala bixin.
Ma kala cadda sababta ay Dowladda Federalka Ethiopia xilligan u sii daayeen Keria Ibrahim, balse, Tallaabadaasi ayaa loo arkaa qorshe bilow ah oo ay ku doonayaan inay dib-u-heshiisiin la galaan Hoggaamiyaasha Xisbiga TPLF ee qeybta ka ah Dagaalka weli ka socda Gobalka Tigrayga.
Si kastaba ha ahaatee, Keri Ibrahim oo ku dhalatay Caasimadda Eritrea ee Asmara bishii March 22-dii ee sanadkii 1973-kii waa Aqoonyahanad haysata Shahaada BA ee Dhaqaalaha iyo Cilmiga Deegaanka (A Bachelor’s degree in Economics and a master’s degree in Environmental anthropology).
Previous articleMeydka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo laga soo dejiyay Muqdisho
Next articleJames Swan oo Warbixin ka gudbinaya xaalada Soomaaliya